YEYINTNGE(CANADA): Monday, June 24
တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းပါ ဆောင်းပါးရှင် ဟန်နာဘိခ်ျ မြန်မာနှင့် ရှေးကပင်ရေစက်ရှိခဲ့ဘူးသည်
ဒီမို ဖက်တီး's photo.
By Robert Elhose ၊ ဇွန်လ ၂၃၊ ၂၀၁၃။
“သမ္မတရုံး ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်U Wira Thu ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရ”
Wira Thu's status.
ဦးဝီရသူထံသို့- မိုးကုတ်မြို့၊ ဓမ္မရံသီဆရာတော် ဦးသုနန္ဒနှင့် မော်လမြိုင်မြို့၊ ဟိတဓရဆရာတော် ဦးဝိမလတို့ ကြွရောက်ကာ သမ္မတရုံး ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့် ရဟန်း၊ ရှင်လူ၊ ပြည်သူအများ စိတ်အေးသွားရကြောင်း ဝမ်းသာအားရ လာရောက်ပြောကြားကြသည်။
ယနေ့ 24.6.2013 ရက်နေ့ မနက် 9:00 နာရီတွင် လာရောက် ပြောကြားရာ- ဟိတဓရဆရာတော် ဦးဝိမလက “သမ္မတကြီးကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ နောက်နောင်လည်း ဒီလိုပဲ အမြဲတမ်း စောင့်ရှောက်ပေးပါလို့ ပြောချင်တယ်။”ဟု လည်းကောင်း။
ဓမ္မရံသီဆရာတော် ဦးသုနန္ဒက “အနာဂတ်မြန်မာပြည်ဟာ သမ္မတကြီး လက်ထဲမှာပဲ ရှိပါတယ်။ သမ္မတကြီး ကျန်းမာပါစေ။”ဟု လည်းကောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သသွားကြပါသည်။
by Mizzima မဇ္ဈိမ (Notes) on Monday, June 24, 2013 at 1:58am
ကေဇင်ဦး | တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၇ နာရီ ၂၅ မိနစ်
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိလျှင်ပင် မလေးရှားရောက် မြန်မာများ မိခင်နိုင်ငံသို့ပြန်ရန် မြန်မာသံရုံးက ထောက်ခံပေးနေကြောင်း အစိုးရကပြောထားသော်လည်း သံရုံးသို့သွားသည့် ထိုလမ်းခရီးမလုံခြုံ၍ ပုန်းနေကြ သူများရှိနေကြောင်း မလေးရှားမှပြန်လာသူ ကိုဝေအောင်သိန်းကပြောသည်။
သံရုံးသို့လာသည့်မြန်မာများကို မလေးရှားရဲများကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးကြပြီး နိုင်ငံကူး လက်မှတ်ရှိသူများကို ပြန်လွှတ်ပေးသော်လည်း မရှိသူများကိုမူ ဖမ်းဆီးထောင်ချသ ဖြင့် သံရုံးသို့သွားရန်ပင် အခက်အခဲရှိနေ သည်ကို သူကရှင်းပြသည်။
ကိုဝေအောင်သိန်းသည် မလေးရှားမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဇွန် ၂၂ ရက်က ပြန်ရောက် လာသူဖြစ်ပြီး ၎င်းအပါအဝင် ကွာလာလမ်ပူ မြို့မှစက်ရုံတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်သည့် မြန်မာ ခြောက်ဦးသည် အကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရပြီး ဒဏ် ရာများရခဲ့ကြသဖြင့် လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်ရှိ ဝိတိုရိယဆေးရုံ၌ ဆေးကုနေကြ သည်။
''အကြမ်းဖက်သူတွေရဲ့အန္တရာယ်လည်း နေရာအနှံ့ရှိနေတဲ့အတွက် မသွားရဲကြဘဲ ပုန်းနေရတဲ့ သူတွေအများကြီး ရှိပါတယ်''ဟု သူကဆိုသည်။
ကိုဝေအောင်သိန်းတို့အဖွဲ့သည် အကြမ်း ဖက်ခံရသည့် ဒဏ်ရာများကို ကုသရန် မလေးရှားတွင် ဆေးရုံတက်ခဲ့ရပြီး ထိုကာလ အတောအတွင်း ဆက်သွယ်လာကြသည့် မြန်မာများက ၎င်းတို့ကို ပြောကြားသည်များ သူက
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုညွှန်မှူး ဦးသက်နိုင်ဦးက ထိုသို့ သံရုံးသွားသည့် လမ်း ခရီးတွင် အဆင်မပြေပါက မလေးရှားရှိ မြန်မာသံရုံးကို တိုင်ကြားနိုင်သည်ဟု မဇ္ဈိမ ကိုပြောသည်။
''သံရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ မလေးရှား အစိုးရနဲ့ပူပေါင်းပြီး ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေ မဖြစ်ရအောင် ဒုဝန် ကြီးတွေသွားကတည်းက ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးသားပါ။ သံရုံးကအားလုံးဖြေရှင်းနေပါတယ်'' ဟု ရှင်း လင်းပြောကြားသည်။
ကိုဝေအောင်သိန်းသည် အကြမ်းဖက်ခံ ရမှုကြောင့် ဓားဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလို ခြေထောက် လည်းကျိုးသွားခဲ့ရပြီး သူနှင့်အတူ အကြမ်း ဖက်ခံရသည့် ကိုခင်မောင်ဝင်း၊ ကိုထွန်းစိုး သိန်း၊ ကိုသန်းကျော်လှိုင်၊ ကိုအောင်နိုင်ဝင်း၊ ကိုအောင်မင်းဌေးတို့အားလုံးသည် ဒဏ်ရာ အများအပြားရရှိခဲ့သည်။ ဇွန် ၆ ရက်က သူ တို့အိပ်ပျော်နေစဉ် မျက်နှာဖုံးစွပ်လူတစ်စု က အကြမ်းဖက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် မလေးရှားရှိ မြန်မာသံရုံး တွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိသဖြင့် နိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက် (Certificate of Identity) လာရောက်လျှောက်ထားသူ ၇ဝဝ ဦးခန့်ရှိကြောင်း မလေးရှားမှ ပြန်လာသူများ က ပြောသည်။
မလေးရှားတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်း ဖက်ခံရမှုများကြောင့် ပြန်လာကြသူ ၁၆၇ ဦး သည် ဇွန် ၁၅ ရက် နေ့လည်က ရန်ကုန်သို့ စတင်ပြန်ခဲ့ကြသည်။
ပဋိပက္ခများ စတင်ဖြစ်ပွားချိန် မေ ၂၉ ရက်မှ ဇွန် ၁၅ ရက်အထိ မလေးရှားမှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြန်လာသည့် မြန်မာဦးရေမှာ ၃၄ဝဝ ခန့်ရှိသည်ဟု ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ လူဝင်မှုကြီး ကြပ်ရေးဌာန၏ စာရင်းဇယားများတွင် ဖော် ပြထားသည်။
အီတာလျံ-ထိုင်းကို ထားဝယ် ဒေသခံတစ်ဦး တရားစွဲမည်
ထားဝယ်၊ ဇွန် ၂၃
ထားဝယ် - ကန်ချနပူရီ လမ်းမကြီး ဖောက်လုပ်ခြင်းကြောင့် ထိခိုက် နစ်နာမှုများ အတွက် ထိုင်းဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ အီတာလျံ-ထိုင်း (ITD) ကို တရားစွဲဆိုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရေဖြူမြို့နယ်မှ ဥယျာဉ်ခြံ ပိုင်ရှင် ဦးဝင်းလွင်ဦးက ပြောကြားသည်။
ထိုင်းကုမ္ပဏီများကြောင့် ထိခိုက် နစ်နာရမှုများကို အချက်အလက် အခိုင်အမာဖြင့် တင်ပြလျှင် ထိုင်းအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် အနေနှင့် ထိုင်းကုမ္ပဏီကို သာမက ထိုင်းအစိုးရကိုပါ တရားစွဲနိုင်ကြောင်း ယင်းကော်မရှင်၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ဒါရိုက်တာ နီရင်ပီတက်ဝချရာက ထားဝယ် ဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ဒေသခံတစ်ဦးက ထိုင်းအကြီးဆုံး ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီကို ပထမဆုံးအဖြစ် တရားစွဲဆိုရန် စီစဉ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ရေဖြူမြို့နယ်၊ တလိုင်းယာ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာ အတွင်းရှိ ကြေးတိုင်ပြင်ကွင်း အမှတ် 9.SSO ဦးပိုင်အမှတ် V.633 ဥယျာဉ် ခြံမြေကို ဖြတ်သန်းကာ ထားဝယ်-ကန်ချနပူရီ လမ်းကို ဖောက်လုပ်ခြင်း
ကြောင့် နှစ်ရှည်ပင်များ ပျက်စီးခြင်း၊ ချောင်းငယ်များ ပိတ်မိခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် ရေဝပ်ပြီး အပင်များ ပျက်စီးခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု ဦးဝင်းလွင်ဦးက ပြောသည်။
“အီတာလျံ-ထိုင်းရုံးကို သွားပြီး ပြောတာ နှစ်ကြိမ်ရှိပြီ။ ဘာမှအရေးတယူ မရှိဘူး။ နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့ပဲ လုပ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် လမ်းဖောက်တဲ့ တာဝန်ခံ အင်ဂျင်နီယာကို တရားစွဲမယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အီတာလျံ-ထိုင်းက ဖောက်လုပ်ထားသည့် လမ်းကြောင့် ဥယျာဉ်ခြံ နှစ်ဧကကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အီတာလျံ-ထိုင်း (ITD) ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းရန် လုပ်ဆောင်သော်လည်း ဆက်သွယ်၍ မရသေးပေ။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် တလိုင်းယာ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာအတွင်း ITD ကုမ္ပဏီမှ ဖောက်လုပ်သည့် လမ်းပိုင်း တစ်နေရာ ဖြစ်သည့် ၂၁ ကီလိုမီတာမှ ၃၈ ကီလိုမီတာအကြား လမ်းအူကြောင်း ဖောက်လုပ်ရာမှ ဥယျာဉ်ခြံ ထိခိုက်သူများကို လျော်ကြေး ပေးဆောင်ရာတွင် သဘောတူညီမှု မရှိခဲ့သူ ဦးဝင်လွင်ဦး အပါအဝင် ၁၄ ဦး ရှိခဲ့သည်ဟု ခုံသမာဓိ အဖွဲ့သို့ ဥယျာဉ် ခြံရှင်များ တင်ပြထားသော စာအရသိရသည်။
တရားစွဲဆို နိုင်ရန်အတွက် ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ရေဖြူမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း ကိုသွားရောက် တိုင်ကြားခဲ့ပြီး လာမည့် သီတင်းပတ်တွင် တရားရုံးနှင့် တိုင်ပင်ကာ အမှုတည်ဆောက်မည်ဟု ဦးဝင်းလွင်ဦးထံမှ သိရသည်။
ထားဝယ် စီမံကိန်းနှင့် လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာရသူ များစွာရှိသော်လည်း ဦးဝင်းလွင်ဦးသည် ပထမဆုံး တရားစွဲရန် ကြိုးစားသူ ဖြစ်သည်။
ထားဝယ် - ကန်ချနပူရီလမ်း ၃၅ကီလိုမီတာ အနီးရှိ ခြံဧရိယာကို ဖြတ်ဖောက်ထားသည့် လမ်းအူကြောင်း နှစ်နေရာအား ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ခြံစည်းရိုး ခတ်ထားခဲ့သော်လည်း ITD ကုမ္ပဏီက ခြံစည်းရိုးအား ဖယ်ရှားခဲ့ကြောင်း ဦးဝင်းလွင်ဦးက ပြောသည်။
၎င်းသည် ဥယျာဉ်ခြံ ၃၅ ဧက ဝန်းကျင်တွင် ရော်ဘာပင်၊ ကွမ်သီးပင်များကို ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ စတင်စိုက်ပျိုး ထားခဲ့သည်။
Sit Naung's photo.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် Mr.Yang Jiechi Thingaha Hotel တွင်တွေ့ဆုံ.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တရုတ်ပြည်သူ့သမတနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် Mr.Yang Jiechi
နှင့်အဖွဲ့အားနေပြည်တော် Thingaha Hotel တွင်တွေ့ဆုံ.........24-6-2013 11:45 AM
ကိုပြုံးချို နဲ့ ကိုအံ့ဘွယ်ကျော်တို့ နှစ်ဦးဟာ စနေနေ့ညနေပိုင်း က ကနေဒါ နိုင်ငံကို ထွက်ခွာ
"၈၈ ညီလာခံ ၈၈ မျိုးဆက်များ တက်ရောက်မည်"
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နဲ့ ကနေဒါ နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ ညီလာခံကို ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ ပွင့်လင်းလူ့ အဖွဲ့အစည်းက ခေါင်းဆောင် (၃) ဦး တက်ရောက် ဆွေးနွေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံး ငွေရတုအကြိုအဖြစ် နိုင်ငံတကာရောက် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေ ပူးပေါင်း စီစဉ်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများညီလာခံကို ကနေဒါနိုင်ငံ တိုရွန်တိုမြို့မှာ ဇွန် ၂၈ ရက် ကနေ ၃၀ ရက် အထိ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး၊ ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ ပွင့်လင်းလူ့ အဖွဲ့အစည်းက ကိုပြုံးချို၊ ကိုအံ့ဘွယ်ကျော် နဲ့ ကိုမင်းဇေယျတို့ တက်ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီညီလာခံမှာ ဆွေးနွေးကြမယ့် ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုဂျင်မီက ရှင်းပြပါတယ်။
"အမေရိကားနဲ့ကနေဒါမှာရှိတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်တွေက ငွေရတုအတွက် သူတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။ခေါင်းစဉ် ခြောက်ခုစီစဉ်ထားတယ်။အဲဒီထဲက အကောင်းဆုံး တစ်ခုကို တည်ပြီး၊ကျန်တာတွေကို ဆွေးနွေးပြီး အဲဒီညီလာခံထဲက ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ရယူသွားမှာပါ။"
ဒီညီလာခံမှာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ၈၈ မျိုးဆက် အားလုံး မြန်မာပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ရေးတွေကို အဓိကထား ဆွေးနွေးကြမယ်လို့လဲ သိရပါတယ်။
ညီလာခံတ က်ရောက်ဖို့အတွက် ကိုပြုံးချို နဲ့ ကိုအံ့ဘွယ်ကျော်တို့ နှစ်ဦးဟာ စနေနေ့ညနေပိုင်း က ကနေဒါ နိုင်ငံကို ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီး၊ ကိုမင်းဇေယျကတော့ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ထွက်ခွာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင် သုံးဦးဟာ လာမယ့် ဇူလိုင် ၅ ရက်က ၇ ရက်အထိ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်၊ ဖို့ဝိန်းမြို့မှာ ကျင်းပမယ့် နိုင်ငံတကာရောက် ၈၈ မျိုးဆက် ညီလာခံကို တက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ရေး ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် PR စာတမ်းဖတ်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီနှင့် တိုင်းရင်းသားပါတီ အများစု ကန့်ကွက်ထားသော အချိုးကျ ကိုယ်စားပြု PR စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် စာတမ်းနှစ်စောင် ဖတ်ကြားခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဦးအောင်သိန်းလင်းက The Voioce သို့ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ညီလာခံကို ဇွန်လ ၂၂ ရက် နေ့မှ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့ထိ သုံးရက် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပြီး အချိုးကျ ကိုယ်စားပြု ရွေးကောက်ပွဲစနစ် (Proportional Representation) နှင့်ပတ်သက်ပြီး အဓိက ထား ဆွေးနွေးလျက် ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အချိုးကျ ကိုယ်စားပြု ရွေးကောက်ပွဲစနစ် (Proportional Representation) စာတမ်းများကို အငြိမ်းစား သံအမတ်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်နှင့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဝင် အငြိမ်းစား ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးက ပါတီဗဟို ကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းခဲ့ပြီး ပါတီဗဟိုကော်မတီ က PR စနစ်၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကို ဆွေးနွေးနေကြောင်း ဦးအောင်သိန်းလင်းက ဆိုသည်။
“PR စနစ်ကို ဆွေးနွေးတာတော့ မှန်တယ်၊ လွှတ်တော်မှာ အတည်ပြုဖို့ မပြုဖို့တော့ ဆုံးဖြတ်ချက် မချရသေးဘူး”ဟု ၎င်းကရှင်းပြသည်။
ဒီမိုကရေစီစနစ် မရင့်ကျက်သေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်ကို ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သော PR ကို ကျင့်သုံးမည် ဆိုပါက ကန့်ကွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ မဟာမိတ်အဖွဲ့ (UNA) ငါးပါတီနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားထားသည်။
ဒီမိုကရေစီ မိတ်ဆွေ ၁၀ ပါတီက PR စနစ် ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးရန် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အတွင်းက ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ တင်သွင်းခဲ့ပြီး ယင်းစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်းတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၅၅ ပါတီတို့ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။
PR စနစ်ကို အတည်ပြုပေးရန် ရွေးကော်ပွဲ ကော်မရှင်က မေလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြထားကြောင်း ရွေးကော်ပွဲ ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ပြီး အဆိုပါစနစ်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း အတည် မပြုနိုင်ပါက ပြည်သူများကို ရွေးကောက်ပွဲစနစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပညာပေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် အချိန် မရှိတော့သဖြင့် လက်ရှိစနစ် အတိုင်းသာ ဆက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက ပြောကြားထားပြီး ဖြစ်သည်။
ဒေါ်ဝါဝါဝင်းရွှေနှင့်786 Great Father Land ကုမ္ပဏီ အငြင်းပွား
မင်းသမီးကြီး ဝါဝါဝင်းရွှေ ဆုထူးပန်တာဝါကို Fatherland နဲ့ မဆောက်တော့ဟုဆို
အရင် ဆုထူးပန်ရုပ်ရှင်ရုံ ကို ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ ဝါဝါဝင်းရွှေက Fatherland ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီနဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ သဘောတူညီချက်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ ဇွန် ၂၃လမှာ ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
တော်ဝင်ဆုထူးပန်တာဝါအဖြစ် ၁၂ ထပ်ဆောက်လုပ်ဖို့ ၂ဝ၁၂ခုနှစ် ဧပြီလကတည်းက ဒေါ်ဝါဝါဝင်းရွှေနဲ့ Fatherland ကုမ္ပဏီတို့ကြား သဘောတူညီခဲ့ပေမယ့် ၉လကြာတဲ့အထိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုမှ စတင်တာမရှိသေးတဲ့အပြင် အခြား သဘောတူညီချက်တွေကို ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဆုထူးပန်တာပါကို ၁၂ထပ်အစား ၂၁ထပ်ဆောက်လုပ်ဖို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နှုတ်ကတိ ရှိခဲ့ပေမယ့် ကုမ္ပဏီဘက်မှ ဒေါ်ဝါ၀ါဝင်းရွှေကို လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေတိုက်ခိုက်လာခဲ့ပြီး ဆက်မဆောက်ဘူးဆိုလျှင်လည်း ဒေါ်ဝါ၀ါဝင်းရွှေပေးထားတဲ့ ကျပ်သိန်း ကိုးထောင်ကို မြေပဲရမယ်လို့ တုန့်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်ဝါ၀ါဝင်းရွှေမှ Fanterland ကုမ္ပဏီက ဒီကိုးထောင်ကို ဆုံးရှုံးခံပြီး မြေကွက်ကိုပြန်လာယူဆိုတဲ့ စကားက အင်မတန် ရင်လေးပါတယ်၊ ကိုယ့်မြေကို ကိုယ် သိန်းကိုးထောင်နဲ့ အလဲခံရမှာ။
နောက်တစ်ခုက ဘာလုပ်ငန်းမှ မလုပ်ပဲနဲ့ ဒီသိန်းကိုးထောင်ကို မတရားလိုချင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မိုလို့ ကျွန်မက နံပါတ် (၁) ဒီစာချုပ်ကို ဒီနေ့ကစပြီး ဖျက်သိမ်းကြောင်းကို တရားဝင် ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေငြာအပ်ပါတယ်။
နံပါတ် (၂) လူမှုရေးအရ ကျွန်မကိုပါ ကျွန်မရဲ့ ဓါတ်ပုံကို မီးရှိ့ပြီးတော့ သူနှစ်ကြိမ်းပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံထားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီနေ့က စပြီးတော့ လုံးဝလုံးဝ ကျွန်မ ဘာမှ မသက်ဆိုင်တော့တဲ့ အကြောင်း တင်ပြအပ်ပါတယ်ဟု မီဒီယာများ၏ မေးမြန်ချက်အား ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
အခန်းတွေကို မရောင်းခင် ကြိုပွိုင့် ရောင်းဖိုက သဘောတူညီခဲ့ပြီး၊ Fanterland ကုမ္ပဏီရဲ့ ညံ့ဖျင်းတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကြောင့် ကြိုရောင်းစနစ်ကို တစ်ရက်အတွင်း ဖျက်သိမ်းခဲ့ရကြောင်း။
စည်ပင်ကို စုံစမ်းတဲ့အခါမှာ Fanterland ကုမ္ပဏီဘက်မှ ၂၁ထပ်ဆောက်လုပ်ဖို့ တင်ပြခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Fanterland ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ဆုထူးပန်ရုပ်ရှင်ရုံမြေနေရာက (၂၄)နာရီအတွင်း ဖယ်ရှားပေးဖို့ ရှပ်ရှင်မင်းသမီးကြီး ၀ါဝါ၀င်းရွှေက ပြောကြားခဲ့ပြီး အစိုးရသတင်းစာတွေ ကနေ ကြေငြာသွားမယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
Fanterland ကုမ္ပဏီကို တရားစွဲဖို့ကိစ္စ ယတိပြတ် ဆုံးဖြတ်ဖို့ မလုပ်ရသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
မနက်ဖြန်သတင်းစာမှာ ပါပါမယ်၊ ဒီလုပ်ငန်းကို မလုပ်တဲ့အတွက် (၂၄)နာရီအတွင်း ဖယ်ရှားပေးဖို့နဲ့ မြေနေရာအား ပြန်ပေးဖို့ ကြေငြာထားကြောင်း။ သတင်းစာတွင် တရားဝင်ပါပြီး ဆောင်ရွက်မှုမရှိပါက ဥပဒေအရ လုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း။
ဖေ့ဘုတ် သတင်း အတင်း အဖျင်း ၏ စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းရှိ ဆုထူးပန် ရုပ်ရှင်ရုံဟောင်း မြေနေရာတွင် အထပ်မြင့် တိုက် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုထူးပန် ရုပ်ရှင်ရုံဟောင်း မြေနေရာပိုင်ရှင် ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ဒေါ်ဝါဝါဝင်းရွှေနှင့် အဆိုပါ အထပ်မြင့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန် တာဝန်ယူထားသော Great Father Land ကုမ္ပဏီတို့ အပြန်အလှန် အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပွားလျက် ရှိကြောင်း နှစ်ဖက်လုံးက အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
ဆုထူးပန် ရုပ်ရှင်ရုံ မြေနေရာတွင် ၁၂ ထပ် အမြင့်ရှိသော အဆင့်မြင့် အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်၍ ပထမထပ်တွင် Shopping Mall ၊ ဒုတိယထပ်တွင် ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် တတိယထပ်တွင် စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကျန်ကိုးထပ်ကို ဟိုတယ်အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ရန် ပါဝင်သော သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆို ခဲ့ကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိသော အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ရမည့် မြေနေရာသည်
နေရာကောင်း ဖြစ်၍ ၁၂ ထပ်အစား ၂၁ ထပ်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန် နှုတ်ဖြင့် သဘောတူခဲ့ကြောင်း မြေပိုင်ရှင် ဒေါ်ဝါဝါဝင်းရွှေက ပြောကြားသည်။
စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့သော ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလမှစ၍ ယနေ့အချိန်ထိ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခြင်း မရှိသေးဘဲ မြေကွက်လပ် အတိုင်းသာ ရှိနေခြင်း၊ ထို့ပြင် ဆောက်လုပ်ရန် တာဝန်ယူထား သူတို့ဘက်က ဆုထူးပန်ရုံ အရှေ့တွင် ညသန်းခေါင် အချိန်တွင် ဒေါ်ဝါဝါဝင်းရွှေ ဓာတ်ပုံကို မီးနှင့်ရှို့ပြီး အမဲသားတုံးပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင် ထွန်းခြင်းတို့ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ရှိသည်ဆို၍ ထိုအကြောင်းကို မေးမြန်းကြည့်ရာတွင် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးကျော်မြင့် ကိုယ်တိုင် ဝန်ခံခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းကြောင့် အဆိုပါ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီကို ယုံကြည်နိုင်ခြင်း မရှိတော့သည့်အတွက် လုပ်ငန်း ဆက်လက် မလုပ်နိုင်တော့ကြောင်း မြေပိုင်ရှင် ဒေါ်ဝါဝါဝင်းရွှေက ပြောကြားသည်။
Great Father Land ကုမ္ပဏီမှ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် ဦးမျိုးမြင့်က“သို့ရာတွင် အဲလို အမဲသားတွေနဲ့ လုပ်တယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ဘက်က လုံးဝ မလုပ်ပါဘူးလို့ ကုမ္ပဏီကိုယ်စား ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ဦးမျိုးမြင့်က မိမိတို့မှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရသည့်အတွက် ဌာနဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ရရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ယခင် ၁၂ ထပ် အဆောက်အအုံကို ထပ်မံ၍ အချင်းချင်း ရင်းနှီးမှုဖြင့် ကားပါကင် အပါအဝင် ၁၂ ထပ် အစား၂၁ ထပ် အဆောက်အအုံ ဆောက်ရန် နှုတ်ဖြင့် သဘောတူညီ ခဲ့သောကြောင့် လုပ်ငန်း ကြန့်ကြာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လုပ်ငန်း အပ်နှံသူဘက်က ကုန်ကျမည့် ငွေ အပြည့်အဝ မဟုတ်ဘဲ စရန် ကျပ်သိန်း ကိုးထောင်သာ ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် မိမိတို့ဘက်က စိုက်ထုတ်ခဲ့ခြင်းများ ရှိကြောင်း၊ စာချုပ်အရ ဆက်လက် မလုပ်ကိုင်နိုင်လျှင် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူမှ စရန်ငွေ အရှုံးဖြစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
“အန်တီဝါက ကိုယ်ပိုင်တဲ့ မြေနေရာကို ကိုယ့်ပိုက်ဆံ သိန်းကိုးထောင်နဲ့ သူတို့ဆီက ပြန်ဝယ်ရမလို ဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ ဒီငွေတွေက ကိုယ်တစ်သက်လုံး အနုပညာနဲ့ ရင်းပြီး လုပ်ခဲ့လို့ ရတဲ့ငွေတွေနဲ့ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံလိုမျိုးတွေ ဆောက်ပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ချင်လို့ စိုက်ထုတ်ထားခဲ့တဲ့ ငွေတွေပါ။ အန်တီဝါက ဖြစ်နိုင်ရင် တရားမစွဲချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ပိုက်ဆံ သိန်းကိုးထောင်ကိုတော့ ပြန်လိုချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လူနေတိုက်ခန်းတွေရောင်းပြီလို့ ကြော်ငြာတာက သူတို့ အကြံပေးလို့ သူတို့ဘက်က အကုန်လုံး လုပ်ခဲ့တာပါ။ အန်တီဝါက အဲ့ဒါတွေကို ဘာမှ နားမလည်ပါဘူး”ဟု ဒေါ်ဝါဝါဝင်းရွှေက ဆိုသည်။
၎င်းတို့သည် ဆောက်လုပ်မည့် ပုံစံများကို တိုင်းဒေသကြီးမှ သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ချပြမည့် ဆဲဆဲတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်း အပ်နှံသူက လူနေ တိုက်ခန်းများ ရောင်းချမည်ဟု ကြော်ငြာ ခဲ့သောကြောင့် အခက် ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွင် အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်လျှင် မြေပိုင်ရှင် အမည်ပေါက် မှန်ကန်ရေး ဌာနဆိုင်ရာတွင် လျှောက်ထား ခြင်းစသည်တို့ကို အဆင့်ဆင့် ပြုလုပ်ခြင်းများ ရှိကြောင်း၊ ထို့ပြင် မိမိတို့ ကုမ္ပဏီသည် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အုပ်ချုပ်သော်လည်း ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်များမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပြီး အလှူအတန်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း Great Father Land ကုမ္ပဏီမှ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် ဦးမျိုးမြင့်က ပြောကြားသည်။
“သူတို့ဘက်က တရားစွဲမယ် ဆိုရင်လည်း ကြိုက်သလို လုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဘက်ကလည်း အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ရင် သေချာ plan ဆွဲပြီးမှ လုပ်တာပါ” ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းပါ ဆောင်းပါးရှင် ဟန်နာဘိခ်ျ မြန်မာန...
“သမ္မတရုံး ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်U Wira Thu ဝမ်းမြောက်...
သံရုံးသွားသည့်လမ်းခရီး မလုံခြုံသဖြင့် မလေးရှားရောက...
ကိုပြုံးချို နဲ့ ကိုအံ့ဘွယ်ကျော်တို့ နှစ်ဦးဟာ စနေ...
ဒေါ်ဝါဝါဝင်းရွှေနှင့်786 Great Father Land ကုမ္ပဏီ အြ...